लसुनप्रेमी मार्केल- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रिन्स हयारीसँग विवाह गरेयता अभिनेत्री मेघान मार्केल समाचारको शीर्षक बनिरहेकी छन् । यस पटक उनको विवशतालाई लिएर खबर छापिएको छ । कुरा के भएछ भने, उनी तरकारीमा लसुन हालेको मन पराउने, लसुनका परिकार स्वाद मानीमानी खादिँरहिछन् । तर, उनकी बूढीसासु–आमा अर्थात् महारानी एलिजाबेथ लसुन भनेपछि दुरदुर भाग्ने !
मार्केललाई लसुन छोड्न कति गाह्रो होला भन्ने कुरा विवाहअघिका उनका अन्तरवार्ता हेर्दा/पढ्दा थाहा पाइन्छ । तिनमा उनले आफ्ना प्रिय खानेकुराको सूचीमा लसुनैलसुनका परिकार उल्लेख गरेकी थिइन् । फिलिपिनो चिकेन एडोबो आफूलाई खुब मीठो लाग्ने उनले बताएकी थिइन् । यो परिकार लसुनका पोटी राखेर बनाइन्छ ।
दरबारमा लसुन परहेज गरिएकाले हयारी र मार्केल छुट्टै घरमा बसेको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ । चिकेन रेसिपीमा मुख मिठयाउने मार्केलको चञ्चलेपनामा भुलिएका हयारीले उनका लागि लसुनसहितका परिकारको बन्दोबस्त गरेकै हुनुपर्ने बेलायती समाचार माध्यमको अड्कल छ ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०८:३६
चित्रकारका आँखामा माइकल ज्याक्सन
काठमाडौँ — निधनपछि पनि सर्वाधिक खोजी हुने र सर्वाधिक सुनिने गायकान पर्छन् माइकल ज्याक्सन । यी अमेरिकी गायकको प्रभाव खास भूगोल र संस्कृतिभन्दा निकै फराकिलो छ । ‘किङ अफ पप’ का रूपमा विश्वभर चिनिएका माइकललाई यो शताब्दीकै प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा लिइन्छ ।
समाज, राजनीति र पहिचानबारे विश्वभर जति बहस भइरहेका छन्, माइकलका गीतसित पनि यी पक्षहरू जोडिन्छन् ।
म्युजिक, भिडियो, डान्स, कोरियोग्राफी र फेसनमा उनको प्रभावबारे थुप्रै चर्चा भए पनि समकालीन चित्रकलामा उनलाई कसरी प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ? यो कौतूहल मेटाउन बेलायतको नेसनल पोट्ेरट ग्यालरीमा माइकलकेन्द्रित चित्रकला प्रदर्शनी हुँदै छ ।
माइकलको ६० औं जन्मदिवसका अवसरमा ग्यालरीले ‘माइकल ज्याक्सन : अन द वाल’ शीर्षक प्रदर्शनी गर्न लागेको हो, जहाँ विश्वप्रसिद्ध समकालीन चित्रकार एन्डी वारहोलदेखि ग्रेसन पेरीसम्मका दिग्गज स्रष्टाले बनाएका माइकल स्वरूप समावेश गरिनेछन् । ग्यालरीले ‘एक्जिबिसन अफ द इयर’ मा माइकलमा माथि बनाइएका सयभन्दा बढी चित्र टाँग्न लागेको छ ।
यो शताब्दीकै प्रभावशाली व्यक्तित्व भएकाले माइकलको सम्मानका लागि चित्रकला प्रदर्शनी गर्न लागेको ग्यालरीका निर्देशक निकोलस कुलिननले बताएका छन् । ‘उनका काम र जीवनी अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्,’ कुलिननले बेलायतको द भोग पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘राजनीति र पहिचानसँग पनि उनी नजिकबाट जोडिन्छन् ।’ ४० जना नयाँ–पुराना चित्रकारलाई माइकलको चित्र कोर्न लगाएर प्रदर्शनी गर्न लागेको उनले बताए । अमेरिकी चित्रकार एन्डी वारहोलले सन् १९८२ मा माइकललाई पहिलो पटक भिजुअल आर्टमा उतारेका थिए ।
माइकल ज्याक्सन इस्टेटसँगको सहकार्यमा आउँदो अगस्टमा हुन लागेको प्रदर्शनीका लागि अनलाइन टिकटको व्यवस्था छ । झन्डै एक महिनासम्म हुने प्रदर्शनीभर ग्यालरीमा छलफल, चित्रकला तालिम, कार्याशाला पनि समेटिनेछन् ।
अमेरिकी सुपरस्टारलाई बेलायतको नेसनल ग्यालरीमा यति ठूलो स्थान दिइनुलाई लिएर कलाकर्मीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘एक्जिबिसन अफ द इयर’ मा माइकलको व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक र सांगीतिक जीवन झल्किने कलाकृति राखिनेछन् ।
प्रदर्शनीमा समावेश हुन लागेका चित्रमध्ये अमेरिकी आर्टिस्ट केहिन्दे विलीको ‘इक्वेस्ट्रिएन पोट्रेट अफ किङ फिलिप सेकेन्ड’, क्यान्डिस ब्रिट्जको ‘किङ’, डारा बिर्नबाउमको ‘द वे यु मेक मी फिल’ जस्ता चित्र/तस्बिरबारे अहिलेदेखि नै चर्चा सुरु भइसकेको छ । विलीले माइकललाई स्पेनी राजा फिलिप द्वितीयको शैलीमा घोडामा बसिरहेको देखाएका छन् ।
‘उनी यस्ता मान्छे हुन् जो इन्डियानाको दुईकोठे घरमा आठ दाजुभाइसँग हुर्किएर विश्वलाई आफूसँगै नचाउन सफल भए,’ ग्यालरी निर्देशक कुलिननले भनेका छन्, ‘माइकल
अद्भुत थिए ।’
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०८:३५